Xildhibaan Mubaarig Bidhi “Waxaan Bogaadinayaa 4393 Sarkaal oo ka tirsan Ciidanka Qaranka ee Madaxweynuhu Dalacsiiyay” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Xildhibaan Mubaarig Bidhi “Waxaan Bogaadinayaa 4393 Sarkaal oo ka tirsan Ciidanka Qaranka ee Madaxweynuhu Dalacsiiyay”
Hargeysa()- Xildhibaan Mubaarig Yuusuf Cilmi (Bidhi) oo ka tirsan Golaha Deegaanka ee degmadda Burco, ayaa hambalyeeyay 4393 sarkaal ee ka tirsan ciidanka qaranka ee madaxweynuhu dallacsiiyay munaasibaddii 23- guurada ee ka soo wareegtay aasaaskooda oo maanta looga dabaal degay dalka.
Sidaasna waxa uu ku sheegay qoraal kooban oo uu u diray warbaahinta, oo u qornaa sidan:-“Waxaan halkan Hambalyo iyo Bogaadin uga dirayaa Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xaasaskooda oo aan ku Bogaadinayo sannad guurada 23-aad ee ka soo wareegtay aasaaskooda markii dhidibka loo taagay sannadkii 1994-kii. Ciidanka Qaranku waa muraayadda iyo hal-beega dawladnimadeenna bilay, waanna geesiyaal dhiigooda u huray inay cadowga dibada ka jiraan dalkooda qiimaha adag ku jooga. Waxaan ILAAHAY uga baryayaa inuu sannadkan sanadkiisa ku gaadhsiiyo bash-bash iyo barwaaqo. Waxaan madaxweynaha ku bogaadinayaa tallaabada uu ku dalacsiiyay 4393 sarkaal oo ka tirsan ciidanka qaranka
Waxa kale oo aan ku ammaanayaa Madaxweyne Siilaanyo, siday iskaga xil-saartay tayaynta iyo kor u qaadista karaammada ciidammada qalabka sida. Haddii ay tahay bixinta derajooyinka ciidanka, qalabeyntooda iyo mushahar iyo gunno u kordhintoodaba.”